Madaxweynaha Jubbaland oo sheegay inuusan Golaha Shacabku ogoleyn awoodda Aqalka Sare – Kalfadhi
Madaxweynaha Jubbaland oo sheegay inuusan Golaha Shacabku ogoleyn awoodda Aqalka Sare
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaan (Axmed Madoobe), ayaa sheegay in sababta ay Labada Aqal ee Baarlamaanku u heshiin la’yihiin uu u arko in ay tahay inuusan Golaha Shacabku ogoleyn awoodda Aqalka Sare. Waxa uu sheegay in sida uu dastuurku u dhigan yahay ay, sidoo kale, qasbeyso isqab-qabsiga ka dhaxeeya Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka.
“Aqalka Sare xusid badan kuma laha (dastuurka)” ayuu yiri Madaxweyne Axmed Madoobe, isaga oo magaalada Kismaayo ka furayey shir Dowlad Goboleedyada loogala tashanayo dhameystirka dastuurka, oo ay soo agaasintay Wasaaradda Dastuurka. Axmed Madoobe waxa uu salka u u dhigay dhamaan ismari waaga Soomaalida ineysan lahayn dastuur ay ku heshiiyeen.
“Labada Baarlamaan maxay ku heshiin la’yihiin”? ayuu isweydiiyey Madaxweynaha Jubbaland. “Baarlamaankaan (Golaha Shacabka) wuu taagnaa. Wuu ka soo shaqeysanayey (dastuurka). Wali wuxuu aad ugu qanacsan yahay inuu wadanku hal baarlamaan leeyahay” ayuu haddana isugu jawaabay. “Waa inaan helnaa waxaan ku heshiino oo cad” ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
Madaxweynuhu waxa uu sheegay in, marka laga soo tago khilaafka Dowladda Dhexe, aysan xitaa heshiin karin Dowlad Goboleedyada iyo Dowladda Federaalka, “haddii” buu yiri “aysan dhicin iney ku heshiiyaan dhameystirka dastuurka”, taas oo uu raaciyey in haddii ay dowladdu isku daydo iney difaacato awoodaheeda ay Dowlad Goboleedyaduna isku dayayaan iney difaacdaan awoodahooda.
“Haddii kale, anigu Madaxweynaan ahay, dowlad yar baan ahay, kursigeygaasaan haystaa, meeshaan doonaan la mari, heshiiskaan doonaan soo galayaa, meeshaan doonaan xoolo u doonanayaa” ayuu yiri Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaan (Axmed Madoobe). “Nina nin ma qabsan karo” ayuu hadalkiisa raaciyey. “Waa in Dowladdda Dhexe ay la timaado in la dhameystiro dastuurka, xuquuqaha la leeyahay lakala helo, awoodaha la qeybiyo” ayuu sidoo kale yiri Madaxweynuhu.
Laakiin, waxa uu Axmed Madoobe xadfay iney dhibaatadu tahay inuusan hogaamiyaha Soomaaliya dareemeyn awoodda iyo fahamka higaamiyayaasha kale ee wax kala leh hogaaminta dalka, sababta iskudhacyada iyo ismari-waaga keeneysana ay taas tahay. “Aniga haddaan maanta kursiga dhexe ee Dowladda Dhexe tago waxaan la sheegayo ee Federaalka dhabarkaan dhigan” ayuu yiri Madaxweynaha Jubbaland, isaga oo tusaaleynayey sida uu qofka Soomaaliga ahi u difaacdo hadba meesha uu joogo.
Waxa uu aad u saluugay suurtagalnimada in la dhameeyo dastuurka sanadkan ama kan xiga, iyada oo aysan Somaliland wali ogolaan Midowga Jamhuuriyadda Soomaaliya. “Waxaa kamida waxyaabaha dastuurkaan aan lala dhameystiri kareyn iyadoon xaaladda Somaliland meel la saarin” ayuu yiri Madaxweyne Axmed Madoobe. “Sida ay hadda wax ku socdaanna waxba laguma heshiin karayo” ayuuna hadalkiisa sii raaciyey.
Shirka afhayeennada golayaasha sharci dejinta oo furmay iyo khilaafka golaha shacabka iyo aqalka sare oo laga hadlayo